Tag: xaqiiqooyinka warbaahinta bulshada | Martech Zone
Tag: xaqiiqooyinka warbaahinta bulshada
Dhinac ka mid ah websaydhka bulshada ee aan jeclahay ayaa ah ciyaarta loo siman yahay ee ay siiso shirkadaha yar iyo weynba, iyo sidoo kale xaqiiqda inay weli tahay Galbeedka Duurjoogta. Ilaa iyo inta aan ka ilaalin karno xakamaynta iyo gacmaha dawladda '' '' '' '' ',' 'waan hubaa inay sii wadi doonto inay sii socoto. Taasi waxay tiri, Had iyo jeer waan murugoodaa markaan fiirsado boostada blogka, infographic, ama webinar ku saabsan qawaaniinta warbaahinta bulshada. Halkaas
Ma ogtahay in boqolkiiba 15 macaamiisha ay adeegsadaan baraha xiriirka bulshada si ay u raadsadaan ganacsiyada maxalliga ah? Shirkado aad u tiro badan ayaa ka lumay fursadda ay ku horumarin lahaayeen bulshadooda ku dhex jirta warbaahinta bulshada, iyagoo gacan ka geysanaya koritaanka maamulkooda iyo ka warqabka shabakadaha dadka aadka u daneynaya wax soo saarkooda iyo adeegyadooda. Xitaa kuwa aqoonsada fursadda wali way ku dhibtoonayaan inay fuliyaan, in kastoo. Waxaan ka wada hadalnay qalabaynta qalabaynta suuqgeynta maxalliga ah ee Balihoo barta